मनाङले उचाल्यो आहा! रारा गोल्डकपको उपाधि - Everest Dainik - News from Nepal
मनाङले उचाल्यो आहा! रारा गोल्डकपको उपाधि
पोखराः १८औँ आहा! रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले उचालेको छ ।
आज भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले हराउँदै मनाङले छैटौं पटक उपाधि उचालेको हो ।
पोखरा रंगशालामा भएको निर्धारित ९० मिनेट र थपिएको ३० मिनेटको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । तर टाइब्रेकरमा मनाङले बाजी मार्‍यो ।
टाइब्रेकरमा पुलिसका भेला सिलवाल, हेम तामाङ र बुद्ध बलले गोल गरे भने मनाङका अन्जन विष्ट, पुजन उपरकोटी, सुरज विके र रञ्जन विष्टले गोल गरे । पुलिसका गोलरक्षकले मनाङको दोस्रो पेनाल्टी रोकेका थिए तर मनाङका गोलरक्षक अजित बरालले पुलिसका तेल तामाङको बल पनि रोके ।
पाँचौं नम्बरमा आएका पुलिसका अजितको प्रहार पनि अजितले रोकेपछि मनाङलाई अवसर आयो, जसमा रञ्जनले कुनै गल्ती गरेनन् ।
ट्याग्स: आहा! रारा गोल्डकप फुटबल, मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब